कोरोना कहरः स्वास्थ्य मन्त्रीसहित ४ हजार ७०३ जना क्वारेन्टिनमा, २७ जना भेन्टिलेटरमा — onlinedabali.com
कोरोना कहरः स्वास्थ्य मन्त्रीसहित ४ हजार ७०३ जना क्वारेन्टिनमा, २७ जना भेन्टिलेटरमा
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढिरहेका छन् । सम्भावित संक्रमित, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका र संक्रमित क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा पुगेका करिब ५ हजार क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आइतबार दिएको जानकारीअनुसार ४ हजार ७ सय ३ क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरै होस क्वारेन्टिन र केही संस्थागत क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । परिवारका सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री आइतबार होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका प्रवक्ता डा. जागेश्वार गौतमले आइतबार थप ९८० जनामा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिए । त्यस्तै आइतबार २७ जना कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर भएको छ । उनीहरुलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरएको छ । तर अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । भेन्टिलेटरमा पुगेका कोरोना संक्रमित कमै निको भएर फर्किने गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण कम भएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा २९०, ललितपुर र भक्तपुरमा ३२र३२ जनामा संक्तमण पुष्टि भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्गर गौतमका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १० हजार ३८२ नमुना परीक्षण गर्दा २९० महिला र ६९० पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ४६ हजार २५७ पुगेको छ ।
त्यसैगरी आइतबार थप ९ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । अब नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २८९ पुगेको छ । त्यस्तै २८ हजार ९४१ जना कोरोना मुक्त भएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण निको भई १८ सय १४ जना डिस्चार्ज भएका छन् । आइतबारसम्म कोरोना संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या २८ हजार ९ सय ४३ जना रहेको छ ।
आइतबारसम्म देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार २७ रहेको छ । संस्थागत आइसोलेसनमा रहेकाको संख्या ९ हजार २०१ रहेको छ । होम आइसोलेसनमा ७ हजार ८२६ जना रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीका ८६ जना, बाराका ७३, सुर्खेतका ४४, रुपन्देहीका ३५, चितवनका ३०, मोरङका २९, झापाका २८, पर्साका २५, स्याङ्जाका २२, कास्की र कैलालीका २१–२१ जना, पाल्पाका १९, नवलपुरका १२, सप्तरी, अर्घाखाँची र अछामका ११–११ जना, धनुषा, धादिङ र बझाङका १०–१० जना, रौतहटका ८ जना, दोलखा र तनहुँका ७-७ जना, संखुवासभा, सिराहा, बर्दिया र बाँकेका ६–६ जना, सर्लाही, गोरखा र जुम्लाका ५–५ जना, कपिलवस्तु र प्युठानका ४–४ जना, महोत्तरी, दाङ, बाग्लुङ र कञ्चनपुरका ३–३ जना, सिन्धुली, नवपरासी, लमजुङ, जाजरकोट, दैलेख र डडेलधुराका २–२ जना तथा उदपयुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, भोजपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र कालीकोटका १–१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि क्वारेन्टिमा बसेका छन् । परिवारकै सदस्यमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनी क्वारेन्टिनमा बसेका हुन् ।